I-Catskills Retreat: IiWineries, iiMarike zamaFama, ukuHamba
Ikhaya elizinzileyo elakhiwe kwiiNtaba zeShawangunk kufutshane neAngry Orchard Cidery, indawo yokuthengisa iwayini yesiXeko, iidolophu ezinqabileyo (eNew Paltz), uhambo olude, kunye neemarike zamafama. Iikhilomitha nje ezingama-85 ukusuka kwisiXeko saseNew York! Ikhaya linomtsalane, kodwa limnandi linendawo eninzi ngaphakathi nangaphandle ukuze uchithe ixesha nabahlobo okanye usapho.
Idesika enkulu inika indawo enkulu yokonwabisa kunye nokujonga iinkwenkwezi. Ikhaya libekwe kwiihektare ezi-2 kwaye umva endleleni kwaye imithi eyaneleyo ibonelela ngobumfihlo obuninzi. Yonwabela imifuno entsha ekhule kwipropathi!
Umgama nje oziikhilomitha ezingama-85 ukusuka eManhattan, eli gumbi lokulala li-3, igumbi lokuhlambela eli-1 elinendawo yomlilo ezi-2 kunye nedesika ejikelezileyo yenza indawo yokubaleka egqibeleleyo! Amagumbi amabini okulala abekwe kumgangatho ongaphezulu kwaye igumbi lokulala kwigumbi elingaphantsi linendawo yomlilo yepropane kwigumbi. Onke amagumbi okulala anoomatrasi beNectar entsha.
I-sofa enkulu kwigumbi lokuhlala kunye netafile yekhitshi ilingana nabantu abayi-6 ngokukhululeka. Zombini zibekwe kwindawo yokubasa iinkuni. Indawo yokusebenza ibekwe ecaleni kwebhayi windows ezijonge kwibhayi windows kunye nokufikelela kwi-intanethi ye-400 mpbs.
Ikhitshi elisandula ukulungiswa inayo yonke into oyifunayo ukuze wenze isidlo esimnandi kunye negrill entsha kraca ekumgangatho ophezulu. Umenzi wekofu weNespresso kunye neepods zibandakanyiwe. Ngezixhobo ezitsha kraca. Igumbi lokuhlambela lisanda kulungiswa kunye nebhafu enzulu elungele ukuphumla.
Indawo entle, ezolileyo, enemithi, yabucala.
Zihlole ngokwam. Ndisoloko ndifumaneka ngemibuzo okanye uncedo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pine Bush